Suuraalee gurguddoo Afriikaa: Muddee 8-14, 2017 - BBC News Afaan Oromoo
Suuraalee gurguddoo Afriikaa: Muddee 8-14, 2017
Suraalee waa'ee Afriikaa fi afriikaa gutuudhaa filataman kan torban kanaa keessaa:
Goodayyaa suuraa Lammiimn Kenyaa Saabriinaa Simaadar wayita dorgommii dubartootaa St. Moritizii, Siwiizarlaandiitti yoo qilleensa irra utaaltu, Guyyaa Jimaataa.
Goodayyaa suuraa Saatalaayitii telekoom Aljariyaa kan jalqabaa Wiixata tare yoo Chaayinaa jiddu gala saatalaayitii Xiichaangitti gadhiifamu
Goodayyaa suuraa Mormitoota Afriikaa Kibbaatti godaantoonni Libiyaa keessatti akka garbaatti fayyadamu waa'ee jedhu mormuudhaan Kibxata tare hiriira bahan...
Goodayyaa suuraa Godaantoonni kunneen biyyaa Libiyaa mana hidhaa Beenghaazii keessatti guyyaa itti aanu ka'an. ...
Goodayyaa suuraa Gabaasa oduu naasiisaa dhiheenya addunyaa gutuutti dhagahameetti aansuun maatiin Maalii irraa kunneen isaan akka Libiyaadhaa bahanii gara manaa deebii'aniif kanneen dhiheenya kana taasifaman namoota kumaatama keessaayi.
Goodayyaa suuraa Lammiin Naayijeeriyaa kan taatee Sopraanoo Omoo Beelloo wayita Legoositti shaakalaa jirtu. Naayijeeriyaatti Opiraa qofaa miti kan baayyee beekamu, garuu akka AFP gabaaseetti shaakala ishee dhaaggeefachuun hedduutuu walitti qabama.
Goodayyaa suuraa Guyyaa Jimaataa biyya Iyivorii koostiit, Abijaanitti Konfaransii Edisii fi dhiibeewwan quunnamtii saalaatiin darban 19ffaa addunyaa irratti kondamiin dubartootaa attamiin akka itti fayyadamu agarsiifame.
Goodayyaa suuraa Bocaa dhakaa kun guyya Kibxataa Haaraareetti waan hojate qulleessaa ture. Innis lammiilee Zimbaabwee miliyoonata bulchiinsa pirezidaantii Immarsan Mnaangaagwee tti yoo turistoonni hojiisaanii bitatan akka daldalli fooyya'uuf hawan keessaayi.
Goodayyaa suuraa Guyyaa Kamisaa miseensoonni humna nageenya Taanzaaniyaa reeffa naga eegsiftoota UN torban darbe Kongootti ajjeefaman 14 f kabaja yoo taasisan.
Goodayyaa suuraa Namichi kun isaan kumaatama guyyaa bilisummaa Keenyaa UK irraa kabajan keessaa tokko, Kibxata guyyaa Jaamhuri guyyaa (Ripablikii).
Goodayyaa suuraa Pirezidaantiin Senegaal Maakii Saall fi Ministirri Mummichaa Jaappaan Shinzo Abee erga ibsa waliinii xumuranii boodaa uffata kubbaa miilaa waljijjiraniiru guyyaa Roobii Tokiyoo keessatti.
Goodayyaa suuraa Haaluma walfakaatunis Pirezidaantiin Naayiariiyaa Muhaammad Buhaariin bakka itti dhalateetti lafa qonnaa yoo dowwachaa jiran.
Goodayyaa suuraa Oggantoonni Khoyisaan kunneen buufata Elizaabeet hanga piritoriyaa torban lamaaf deemuun Gammoo Gamtaa lafa teessoo motummaa dhaquun akka afaani fi hawwasni isaanii akka jiraattota Afriikaa Kibbaa kan duraatti beekamtii argatu gaafachuu dhaqan.